Ny Monasiteran'i Guadalupe | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | España, mpitarika
Eoropa dia feno fiangonana sy monasitera ary ny sasany amin'ireo tsara tarehy indrindra dia any Espana. Izany no tranga Monasiteran'i Guadalupe, Lova eran-tany nanomboka tamin'ny taona 1993. Izy io dia mampifangaro ny fomba samy hafa, dia taloha ary miambina fatratra ny sarin'ny Virjin'i Guadalupe, izay Saint-patron any Extremadura ary Mpanjakavavin'i Hispanidad.
Tianao ve ny fizahantany ara-pivavahana? Tianao ve ny hahafantatra ny tranobe sy ny tontolo rehetra izay nambaran'ny UNESCO fa lova lova rehefa mandeha ny fotoana? Avy eo ianao dia afaka manambatra azy roa ary mitsangatsangana kely Extremadura hahalala an'ity toerana mahafinaritra ity.
1 Ny Monasiteran'i Guadalupe
2 Tsidiho ny Monasiteran'i Guadalupe
Ny anarany feno dia Monasiteran'ny Santa María de Guadalupe ary izy dia eo amin'ny fiarahamonina mizaka tena an'i Extremadura, ao anatin'ny faritanin'i Cáceres (iray amin'ireo roa mandrafitra ity vondrom-piarahamonina ity). Extremadura dia tany manankarena tantara ary nanome ny fanjanahana an'i Amerika endri-tsoratra fanta-daza: Hernán Cortés, Francisco Pizarro ary Pedro de Valdivia, ireo mpandresy roa voalohany tamin'ny fanjakana Aztec sy Inca ary tany Chili no tranga fahatelo.
Ny tantara dia milaza fa tamin'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo dia niady tamin'ny Arabo ny Kristiana Ho an'ny ady any Salado, Mpanjaka Alfonso XI dia nanankina ny tenany tamin'ny Virjin'i Guadalupe, virijina efa nanaja olona izay hita teo akaikin'ny renirano mitovy anarana aminy taloha. Toy ny mahazatra, dia nilaza fa ny fandresena nataony tamin'ny fidirana an-tsehatra nataon'ny Virjiny, noho izany, dia nandidy ny hanangana sy hanitatra faritany iray efa niasa izy mba hahafahana mankafy kokoa azy io.
Rehefa nandeha ny fotoana dia lasa toeram-piarovana voalohan'ny Virjin'i Guadalupe ny hermitage ary ny fivoarany ho fiangonana sy monasitera dia mifandray akaiky amin'ny fitondran'i Alfonso XI avy any Castile. Izy no nandidy ny fanitarana ny trano tany am-boalohany, tsotra sy rava, ary izy koa no nandidy ny fananganana hopitaly hampiantranoana ireo mpivahiny marobe tonga tao amin'ny fitoerana masina. Nanome amboara ihany koa izy, nanangana ny fiarovana ny mpanjaka, ary nangataka ny fananganana priory, izay haingana nataon'ny Evekan'i Toledo.
Noho izany dia teraka ny laika laika ao Santa María de Guadalupe ary voalamina ny tanàna manodidina azy. Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana nitarina bebe kokoa ny fitoerana masina ary natsangana ho monasitera ka ny moanika laika dia nosoloin'ny moanina. Noho izany, ny monasitera dia lasa ampahany amin'ny tambajotra monasite midadasika ary na dia tsy tian'ireo mponina ao Guadalupe mihitsy aza ny fiovan'ny tànana (raha ny marina, ny hetsi-panoherana sy ny korontana dia naharitra taonjato maro), tsy nisy azo nanovana ny fizotry ny tantara.
populaire ny monasitera no niandraikitra ny moanina Hieroniteite izany dia nijanona taonjato efatra sy tapany mahery. Tamin'izany fotoana izany dia nahatratra 22 metatra toradroa izany, tamin'ny fotoana nielezan'ny fivavahan'ny Virjin'i Guadalupe hatraiza hatraiza, tafiditra ao anatin'izany ny Canaries sy Amerika. Miresaka amerikana teto dia teto no toerana nandraisan'ny mpanjaka katolika an'i Columbus isaky ny nifankahita izy ireo talohan'ny dia voalohany ary teto tamin'ny 1496 tokoa natao batemy ny karana amerikana nampidirina ho mpanompo.
Nandritra ny tapany voalohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nitsahatra tsy an'ny monasiter Hieronimita ilay monasitera ary lasa paroasy laika miankina amin'ny Arsidiosezin'i Toledo. Nandritra ny taona maro nisian'ny exclaustration dia nianjera tany amin'ny fandaozana sy ny faharavana izy taoriana kelin'izay tonga niambina sy nitantana izany ny Franciscanans. Izy ireo no nanangana ny monasitera. A) Ie Pius XII dia nanambara fa bazilika ary notsidihan'i John Paul II aza izy tamin'ny 80.
Tsidiho ny Monasiteran'i Guadalupe
Mampihoron-koditra ilay toerana. Ny zavatra voalohany hitanao dia kianja malalaka misy loharano eo afovoany izay misy ny batisan'ny fiangonana. Amin'ny faran'ny tohatra misy varavarana lehibe. Ny façade, nanomboka tamin'ny 1460, dia nifanila tamin'ny tilikambo roa lehibe tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary azo jerena fa ny firafitra dia vita amin'ny làlana efatra, misy arofanina daholo, ary ny roa amin'izy ireo dia miditra ao anatin'ny fiangonana raha ny roa kosa manome fanazavana. ao anaty. Misy ihany koa ny varavarankely raozy tsara tarehy ary ny biraon'ny tapakila handoavana ny fidirana na ny fivarotana fahatsiarovana dia eo andrefana izay misy ny fidirana mankamin'ny fiankinan-doha amin'ny monastic.
Ny facade dia amin'ny fomba Gothic ary manolo ny iray teo aloha. Nandritra ity fanarenana ity dia nisy toerana miendrika mahitsizoro voavolavola, izay no zavatra voalohany hitanao rehefa miditra am-piangonana ary mandrafitra ny trano fiangonana ao Santa Ana miaraka amin'ny fasan'i Don Alfonso de Velasco sy ny vadiny, Ramatoa Isabel de Quadros. Ho fanampin'ity fasana ity dia misy endritsoratra vy izay novaina ho fontam-batisanina nanomboka tamin'ny 1402 ary nafindra tamin'io toerana io tamin'ny taonjato faha-XNUMX avy tao amin'ny lavaka fandriam-bahiny.
Ny fiangonana mihitsy dia tranobe misy rihana telo misy amboarampeo lehibe. Ambonin'ireo naveta dia misy valindrihana mitafo vaventy, miaraka amin'ny terceletes ao amin'ny tendrony lehibe ary misy tadiny ao aoriana. Ny dome dia manome hazavana voajanahary betsaka ary toy izany koa ireo varavarankely roa raozy, ny iray amin'ny lafiny roa amin'ny transept. Ny trano fiangonana lehibe dia tafasaraka amin'ireo naveta amin'ny alàlan'ny grila tsara tarehy iray nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-1609. Amin'ny lafiny iray, ny Alitara Avo dia manana alitara mahafinaritra hatramin'ny XNUMX ary ao amin'ny presbytera dia ny fasan'i Enrique IV sy ny reniny María de Aragón.
Aorian'ny fitsidihana ao anatin'ny monasitera dia azonao atao ny mahafantatra ilay Cloister of Fahagagana, Kianja misy tohanan'ny soavaly sy zaridaina. Misy lavadrano ao anaty tempoly iray, izay ahitanao tranokely varahina izay nivoahan'ny rano, izay avy eo nilatsaka tao anaty vilia iray vita amin'ny oktagonaly. Ny sary eo amin'ny gorodona dia misy ifandraisany amin'ny fiainan'ny Virjin'i Guadalupe ary misy sary sokitra miaraka amin'ireo gara Kalvary. Eo koa no misy tohatra tranainy mankany amin'ny amboarampeo.
Ny fon'ny fiangonana dia ny tempoly, toradroa amin'ny ivelany ary hexagonal ao anatiny, rihana telo ary misy rihana roa ambony voaravaka taila tsara tarehy. Misy tranombakoka tena mahaliana ao anatin'ny monastera: ny Museum an'i Cantorales, miaraka amin'ireo horonam-bokiny taloha, ny Tranombakoky ny sary sokitra sy sary hosodoko ary ny Tranombakoky ny firavaka masina. Nandritra ny fitsidihana, ny reliquary, ny sacristy, ny efitra fitafiana an'ny Virjiny ary ny Virjin'i Guadalupe tenany (amin'ny hazo polychrome).
Mba hamaranana dia avelako ho anao ny Fotoam-pivoriana: amin'ny andro fiasana dia amin'ny 12 sy 20 ora ny be sy ny maro. Alahady amin'ny 11 sy 12 ary avy eo amin'ny 13 sy 20 ora; Ary lazaiko anao ihany koa fa afaka mijanona mandritra ny alina ianao satria misy hotely miasa koa eto, ny Hotel Hospedería Monasterio de Guadalupe, sokajy kintana roa sy efitrano 47 ao amin'ny tapany taloha amin'ny tanimanga Gothic.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Ny Monasiteran'i Guadalupe
Inona no jerena ao Santiago de Compostela